SCIENCE TO SOCIETY: हाम्रा'त हिउं पर्यो,तपाइका तिर नि?
किचनको झ्यालबाट बाहिर हेर्दा
अबको यो हिउ मे जुन सम्म त मज्जाले बस्छ। तापक्रम निकै काम हुन्छ अब। सदै पानी जम्ने भन्दा तलै। तर हावामा पानीको मात्र काम हुने भाको'(भएको) ले गर्दा हिउं खसी रन पाउदैन। तर परेको हिउ कहीले पग्लिने होईन केरे। हावामा अली अली पानी जम्मा हुँदा बित्तिकै हिउ बनेर झरी हाल्छ, तेस्मा पनि उत्तरी ध्रुबबाट निस्किने चिसो हावा क्यनडा तिर घुम्दै यता तिर आयो भने ताजा हिउंको बर्षा हुन्छ। सुरु सुरुमा त हिउ देख्दा रमाइलाई हुन्छ तर बिस्तारै यसले दैनिक जीवन अफ्ठेरो पारिदिन्छ। तर पनि प्रकृतिको नियम। त्यो अनुसार भएन भने झन बर्बाद होला नि। एक किसीमा ले कहीले हिउ पर्ला भन्ने भैरा'थ्यो। सेप्टेम्बर मा आउनु पर्ने हिउं नोवेम्बर सम्म न आउँदा त कस्तो कस्तो नि। अझ बर्षको ९ महिना हिउं देखिरहने ठाउमा अली लामो समय देख्न नपाउदा त के नभा के नभा जस्तो।
घर बाहिर हेर्दा
नेपालबाट आ'को (आएको) भने पछि कति पए खैरेको दिमाग मा सेता हिमालाई हिमालको ठाउबाट आको मान्छे, हिउंमै जन्म्यो होला, हिउंमै हुर्क्यो होला, स्कि, स्नोव्बोर्ड त टन्नै गर्छ होला भन्ने धारणा बना'(बनाएका) हुनी रैछन्। यसै बारेको पोस्ट यहाँ(अम्रिका बस्दाका रोचक प्रसँगहरु ) हेर्नु होला। तर मैले हिउ छोएको, नजिक बाट देखेको अम्रिका आए पछि मात्रै हो। कोर्भ्यालिस बस्दाका हिउं सम्बन्धी पोस्टहरु यहाँ र यो पनि हेर्नुस्।
जैबिक जीवन साच्चिकै गा'रो हुन्छ अब। अहिले सम्म देखिएका अलि अलि अलि चराहरु(मैले चिनेको त कौवा हो, अरु एकाध पनि देख्खेका थे'समर मा) अब हराउनु पर्छ। कता जान्छन कुन्नि? दक्षिण तिर जान्छन की यतै कतै गुप्त बास बस्छन था' भएन। अनी लोखर्के पनि हराउछन्। बरु पोहोर को हिउदमा त अलि खरायो देखेको थिय।
अबका ६-८ महिना हिउं सम्बन्धित रमाइलो गर्ने भनेको स्की अथवा स्नो बोर्ड हो। स्की त एक्पटक गर्या छु,ओरेगन हुदा। मिल्यो भने यसपालि स्की वा स्नो बोर्ड गर्नु पर्ला। अनि अर्को कुरा आइस फिशिङ पनि खुब गर्छन् मान्छेहरु। हुन्छ के भने नि, भा'का ताल तलैया सब हिउले जम्छन्। भन्नु होला की त्यहाँ भा'का माछा कहाँ जान्छन त? तर यदि स्कुलमा पढेको बिग्यान सम्झिनु भयो भने याद आइहाल्नु पर्ने हो त्यहा के हुन्छ भनेर। मलाइ अझै याद छ यौटा प्रश्न को त्यो खुब आउथ्यो परिक्षामा "ताल को पानी जमे पनि ताल मुनिका माछा मर्दैनन, किन?" भन्ने टाइपको। हो ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ। तालको माथिको पानी जमेर आइस बन्छ, पुरै स्केटिङ खेल्न मिल्ने तरिका को। तर तल मुनीको पानी भने जस्ताको तेस्तै। अनि माछा त्यहि पानीमा खेली रन्छन्। माछा मार्ने माझी दाई लाई यसले के छेक्थ्यो र। के गर्ने भने, त्यो आइस मा दुलो बनाउने। केही फिट मात्रै त हो नि। अनि त्यहि दुलो बाट बल्छी छिराउने। दुलो ओरी परि भा'का माछा उज्यालो देखेर दुलोको ओरी परि आउछन अनि फटा फट बल्छिमा पर्‍यो बाहिर तान्यो। पोहोर अर्कैले गरि राकोमा यसो रहर मेटेको थिय। यसपाली मिल्यो भने यो पनि गर्ने बिचार छ।
लौ त यो पोस्ट लाई यति। तपाइ आफ्नो अनुभब पनि बड्नु होला।
Aakar November 13, 2010 at 10:39 PM
हाम्लाई त हिउँ परो भन्ने सुन्दा रमाइलो लाग्छ, तर तपाईलाई दिक्क लगाइसकेछ ! क्यार्नु आफूले अहिले सम्म हिँउ नदेख्या भएर होला, त्यस्तो लागेको !
Prabesh November 14, 2010 at 8:47 PM
हिउँ परेको त मैले नि देखेको छैन...फुस्स उडेर आएजस्तो हुन्छ भन्छन्...